Tsy ny Google - Semalt Expert ihany no manadihady ny antony hanatsarana ny fikarohana hafa
Rehefa manao e-varotra ny SEO, ny SEO dia fitaovana entina hanomezana mpanjifa maneran-tany ary hampitombo ny fiovan'ny mpitsidika amin'ny mpanjifa. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny hafatra, miresaka momba an'i Google irery izahay rehefa miresaka momba ny fanadiovana fikarohana. Maro ny olona tokony hianatra fa SEO dia hevi-po, fa tsy fomba fanao, ary azo ampiharina amin'ny milina fikarohana - best tour companies south america. Ny fanandraman'ny orinasanay dia nanamafy fa ny fampiasana Google irery ho toy ny milina fikarohana hanatsarana azy dia fahadisoana mahatsiravina. Avy amin'ny sehatra maromaro ao amin'ny tranonkala, ny fitaovan'ny fikarohana dia fomba iray ahazoana mpanjifa an-tserasera, fa tsy tokana ihany. Google dia iray amin'ireo fitaovam-pikarohana ireo, izay mitranga indrindra amin'ny manaraka.
Amin'ny maha-dokambarotra amin'ny aterineto anao, ny loharanon-kevitra voalohany dia ny mametraka ny mpanjifa maneran-tany amin'ny fampiasana ny Internet ho fitaovanao. SEO dia teknika ara-barotra dizitaly izay ny fandrosoana voalohany dia ny teny fototra sy ny metrika azony. Ity tranga ity dia midika fa tsy i Google irery no fomba fampiharana ireo hevitra ireo. Avy amin'ny analytics, google fotsiny no misy azy satria izy no milina fikarohana lehibe indrindra ary manana fandrakofana feno momba ny fampiasana azy.
Nik Chaykovskiy, Tale Mpitarika Success Successor Semalt Digital Services, dia manazava hoe nahoana ny mpizara dizitaly dia tokony hieritreritra mihoatra lavitra noho ny sehatry ny fikarohana.
Misy toerana hafa ve?
Google dia tsy ilay toerana tokana azonao tanisaina. Ireo orinasa lehibe tahaka an'i Alibaba dia nianatra io hevitra io ary nampiasa azy io. Nahavita nanangana tamba-jotra izy ireo ary nanao fahefana ambony tao amin'ireo nichany..Manana fanatanjahana matanjaka amin'ny aterineto izy ireo. Na eo aza izany, ny tranonkala dia manana fifamoivoizana mivantana izay tsy avy amin'ny milina fikarohana. Midika izany fa ny fampiasana Google irery dia mety ho fetra amin'ny ezaka SEO anao. Ohatra, misy olona afaka mankany Alibaba mivantana mba hikaroka zavatra iray ary amin'ny alalan'ny Google pass. Ny fampiasana an'io hevitra io dia azonao ampiasaina:
Amazon sy Ebay.
Maro ny mpividy mitady ny mitady zavatra amin'ny eBay. Tsy misaintsaina ireo fiara fitadiavana io fifamoivoizana io. Ny mpividy tsara amin'ny aterineto dia mamoaka ny zavatra rehetra ao amin'ireo niches mitovy amin'ny Google. Ny teknikan'ny SEO miasa amin'ireo tranonkala ireo. Ohatra, ny anarana, ny sary ary ny famaritana dia mety ahitana teny fanalahidy. Amazon dia manana fandaharam-potoana afrikana izay afaka hanome mari-panafividiana fanampiny ho an'ny olona hahazo ny zavatra mivarotra.
Asa fitadiavana hafa
Rehefa manao SEO, misy hafa niches azonao ampiasaina mba hahatongavana any amin'ny tsena hafa. Ohatra, maro ireo mpitoraka blaogy no nahita ny fampiasana an'i Bing sy Yahoo mba haka ireo mpanjifa an-tserasera. Tsy ny olona rehetra no miantso an'i Google amin'ny fangatahana karoka. Avy amin'ny solaitrabe amin'ny ankamaroan'ny bolongana, ny fitaterana fikarohana hafa dia afaka mitondra ny sasany amin'ireo mpanjifa sarobidy indrindra.
Raha ny fitsipika, ny votoatin'ny SEO dia manondro an'i Google. Maro ny olona manontany tena raha ilaina ny manatsara ny tranonkala ho an'ny Google irery. Google irery tsy ny hany karoka fikarohana miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra ny tranokalanao. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, Google no fitaovana lehibe indrindra amin'ny karoka. Na eo aza izany, ny fomba fijerin'ny mpizara marika dia matetika kokoa kokoa noho i Google irery. Heverin'ny olona iray fa tsy vitan'ny fikarohana izany rehefa manao dokam-barotra an-tserasera. Midika izany fa ny SEO dia hevi-dehibe iray izay afaka manapaka amin'ny sehatra maro aterineto.